Somaliland: Fuaad Adan Cadde oo ku Geeriyooday Turkey
Home Somali News Somaliland: Fuad Adan Cade oo ku Geeriyooday Turkey
Somaliland: Fuad Adan Cade oo ku Geeriyooday Turkey
Inaa lilaahi wa Ina ileyhi raajucuun الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون
Turkey – Allah ha uu naxariistee waxa abaaro 3:30 am saaq badhkii ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magalada Istanbul ee dalka Turkiga, la taliyahii madaxweynaha ee arrimaha siyaasada ee Bariga Somaliland marxum Fuaad Aadan Cade.
Sida uu inugu xaaqijiyee Cismaan Karaash oo aanu kala xidhidhnay kahdka telefoonka isagu ku sugan magalada Hargeysa, uu wiil uu dhalay marxumku Xuseen Fuaad Aaden Cadee uu xaqijiyee geerida. Marxum Fuaad aadan cadde ayaa maalmihii u danbayay xaaladiisu ay liidatay ka dib markii uu mudo dhowr bilood ah uu jiifay jug ka soo gadhay babuur isagu ku sugan aqaalka madaxtoyada Somailand, jugtaas oo dhawaac ka soo gadhay dhinaca boodadiisa bidix oo laba qaybood uu jabtay.
Ka hor intaanu uu ambabixin dalka Turkiga, ayanu ku booqanay cisbiitaalka Gargaar ee magalada Hargeysa, Isagu aanu ka waraysanay xalaadiisaa caafimaad isla markana oo uu wakhtiga marxumku inuu xaaqijiyee in uu fiisee sharci ka helay cisbiitaal ku yaala dalka Turkiga. Waxana dhamaan hawlwadeenada iyo tafatireyaasha bahda Gobanimonews.com tacsi uu direyaan qoyska reer Aaden Cadee iyo reer Fuad Aaden cadee iyo dhamaan shacbiga reer Somaliland oo dhan meel kaste ay joogan, waxana ilahay bisha barakaysan ee ramadanta uu baryayana uu naxaristii janatul fardausa uga waraabiyo.. amin amin amin amin amin amin amin amin..
Fuad Adan Cadde
Somaliland: Faysal Cali Oo Ka Yaabiyey Reer Awdal Balse Maxa Kala Qabsaday Yaab? Soomaaliweyn Ma Nihin,,,
Kenya: Mareykanka oo $45 milyan ugu deeqay Kenya si wax loogu qabto qaxootiga
Maxkamad ku taalla dalka Itoobiya oo xukuntay laba Nin oo lala xiriiriyay Al Shabaab